Tag: barnaamijka higaada | Martech Zone
Tag: barnaamijka higgaadinta
Hubiyaha Naxwaha Ugu Fiican Blogs, E-mayl, Mobilada iyo Baraha Bulshada
Khamiista, Oktoobar 8, 2020 Axad, Maarso 7, 2021 Douglas Karr
Hadaad akhriste ahayd Martech Zone in muddo ah, waad ogtahay inaan xoogaa caawinaad ah ugu isticmaali karo waaxda tifaftirka. Maaha inaanan dan ka lahayn higgaadinta iyo naxwaha, aniga ayaa daneeya. Dhibaatada ayaa ah mid caado u ah. Muddo sanado ah, waxaan qoraayay oo daabacayay maqaalladayada duulimaadka. Ma maraan talaabooyin badan oo oggolaansho ah - iyaga ayaa la baaray, la qoray, lana daabacay. Nasiib darrose, taas ayaa aniga sababtay